#Madagascar – « By pass : 4×4 nifandona, olona telo namoy ny ainy | «ONG Lalana Blog
#Madagascar – « By pass » : 4×4 nifandona, olona telo namoy ny ainy
Vokatry ny fandehanana mafy loatra sy ny tsy fifandeferana no voalaza fa nahatonga ny loza.
Olona telo no indray namoy ny ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana nitranga tetsy Ankadindratombo, amin’ny lalan’ny “By-Pass”, ny sabotsy lasa teo tokony ho tamin’ny 7 ora hariva. Fiara 4×4 roa, ny iray avy any Alasora ho any Mandroseza, ary ilay fiara faharoa kosa avy any Iavoloha. Teo amin’ny lalana mifanapaka no nitrangan’ny loza. Mafy dia mafy ny fifandonana raha ny fahitana ny fahapotehan’ny fiara. Nipitika avy tao anatin’ny fiara mihitsy ny olona roa tao anatin’ilay Toyota.
Tsy fantatra mazava moa na tsy nifankatazana ireto fiara ireto na efa samy maika handeha hamonjy fodiana, ny andro rahateo efa maizina, ka dia izao loza mahatsiravina izao. Ilay fiara 4×4 faharoa avy any Iavoloha moa no tena voa mafy satria tao anatiny avokoa no nisy ireo olona telo maty, izay vehivavy roa 42 taona sy 30 taona, ary rangahy iray 40 taona.
Ilay rangahy sy ramatoa moa teo no ho eo dia tapitra aina fa ilay vehivavy iray 30 taona mbola tonga tany amin’ny hopitaly ihany, saingy tsy tana ny ainy. Tao amin’ilay fiara voalohany indray kosa dia olona telo no naratra. Fa tetsy andanin’izany dia samy potika ihany koa ny fiara, fa ny an’ilay faharoa no tena voa.
Lalana isan’ny tena matetika itrangana lozam-pifamoivoizana ity lalan’ny “By-Pass” ity. Malalaka ny lalana ka samy manararaotra mandeha mafy ny fiara sy ny moto. Ny tsy fahafehezana ny familiana sy ny lalanan’ny fifamoivoizana anefa dia miafara amin’ny loza amoizana ain’olona toy izao.